Mpisolovava Rahampitso Manome Fanantenana ho an’ireo Lasibatry ny Fanondranan’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2015 5:07 GMT
Kinshasa, RD Congo: Tanam-behivavy iray manao sary famantarana fo amin'ny androm-pahamendrehana ho an'ny lasibatry ny fanondranana olombelona, nankalazaina tamin'ny 30 Jolay. Saripikan'ny MONUSCO Photos; Mpaka sary: Abel Kavanagh; nampiasaina noho ny lisansa CC BY-SA 2.0.
Nifandray tanana ny mpianatra lalàna manerana an'i Karaiba ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana antserasera manerantany ho fampahafantarana ny Andro Manerantany Iadiana Amin'ny Fanondranana Olona. Notabatabain-dry zareo ny momba ilay heloka bevava ao amin'ny firenendry zareo ary naneho firaisankina tamin'ireo lasibatra ao amin'ny fiarahamonina sy fikambanana ary orinasa misy an-dry zareo ry zareo.
“Manome Fanantenana aho”. DIEZY: #igivehope
Niditra an-tsehatra tao amin'ny hetsika ny Mpianatra ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna Hugh Wooding ao Trinite sy Tobago.
Goyaney mpianatra, Stefan Knights, izay nandray anjara tamin'ny tetikasan-dresaka momba ny fanondranan'olombelona nokarakarain'ny sekoly Klinikan'ny Lalànan'ny Zon'Olombelona ,no nanome famakafakana iray momba ny fiantraikan'ny fanondranan'olombelona tao amin'ny faritra Karaiba:
Nanana endrika sy bika maro ny fanondranan'olombelona tao Karaiba. Ny endrika fanondranan'olombelona malaza indrindra nanaovana adihevitra amin'ny ankapobeny dia ny vehivavy sy ny zazavavy noterena hivaro-tena eny an-dalambe. Na izany aza, tsy izay ihany ny endrika fitrandrahana ara-pananahana mitranga ao amin'ny faritra. Ny fizahantany fampiasana ny ankizy hivarotena sy ny faneren'ny olondehibe ny ankizy hanao firaisam-batana amin'ny lehilahy sy vehivavy maro ho takalon'ny vola na fanomezana fahita ao Belize dia mandrafitra ny heloka bevavan'ny fanondranan'olombelona. Endrika hafa amin'ny fanondranan'olombelona ny asa an-tery sy ny fanompoana an-trano. Hita ao Karaiba ireo endrika fanondranan'olombelona ireo saingy tsy raharahian'ny fiaraha-monina. Ny ohatra no mampiditra ny asa an-tery any amin'ny indostrian'ny fanjonoana sy ny fanorenana. Vao haingana teo tao Suriname, dia nosamborina noho ny fanondranan'olombelona ny tantsaha iray rehefa nitory ireo olom-pirenena Goyaney fa terena hiasa maimaimpoana ao amin'ny toera-piompiany sy famboleny izy ireo. Ambonin'izany ao Goyana sy Trinite, ny fahamaroan'ny ankizy terena hivarotra sy hangataka eny an-dalambe dia endrika iray amin'ny fanondranan'olombelona. Ankoatra izay, endrika hafa amin'ny fanondranan'olombelona ny fanerena ny ankizy hanao raharaha mafy ao an-trano, rehefa irahin'ny ray amandreniny honina sy hiasa amin'ny fianakaviana hafa manaiky ny hanome sakafo, fitafiana ary fialofana ireo ankizy ireo; fahita mahazatra any Haiti izany.
Niroboka i Knights hifanakalo hevitra amin'ny fiantraikan'ny fanondranan'olona ao amin'ny fiarahamonina karaibeana:
Mametraka haika lehibe amin'ny fampandrosoana maharitra ao Karaiba ny fanondranan'olona. Tsy isalasalana fa ireo lasibatra ireo dia hizaka ny ampahany betsaka indrindra amin'ny mety fahazoana ny valan'aretina azo avy amin'ny firaisana sy ny VIH SIDA ka hatrany amin'ny fanaintainana ara-toetsaina sy toe-po mbamin'ny fanakanana azy ireo tsy hisitraka ny ankamaroan'ny zo fototra mahaolombelona maro dia maro. Ho henjana ihany koa ny vokatry ny fanondranan'olombelona ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ny fanondranan'olona dia mampivandravandra ny olana ara-piarahamonina amin'ny ankapobeny toy ny herisetra, kolikoly ary ny fahantrana.
Ny fitandremana ny Andro Manerantany Iadiana amin'ny Fanondranan'Olombelona dia nifanandrify tamin'ny tetikasa farny indrindra navoakan'ny Klinikan'ny Lalànan'ny Zon'Olombelona izay nanontaniana ny hoe “What does freedom mean to you?“ [Inona ny dikan'ny fahafahana ho anao?]. Tamin'ny voalohany volana aogositra dia zaratany maro no nahatsiaro ny tsingerintaonan'ny fanafahana ny andevo Afrikana tany amin'ny India Andrefana Britanika.
Mandritra izany fotoana izany, dia faly ireo mpianatra lalàna hafa mandray anjara amin'ny fanentanana #igivehope, amin'ny alalan'ny fandraisana anjara voarindra ao amin'ny media sosialy.
Androany ny androm-pirenena iadiana amin'ny fanondranan'olombelona! tian'ny mpanantanteraka ato amin'ny komitin'ny zon'olombelona ny mampahatsiahy anao hanoananao ny hafatra! Mamoaha androany sarinao na sary miaraka amin'ny namanao manao endrika fo ka paingory an-tserasera izahay! Aza adinoina ny diezy #igivehope – ho avoakanay hiampita ny sarinareo, ilazao ny namanao <3 Sary navoakan'ny zon'olombelona HWLS
@Regrann from @bohochicster92 – World Day Against Trafficking In Persons #IGiveHope #Hearts #Love #CelebrateFreedom #Regrann A photo posted by HWLS Human Rights Committee (@hwls_hrc) on Jul 30, 2015 at 8:54am PDT
Andro manerantany iadiana amin'ny fanondranan'olona, manome fanantenana aho, fo, fitiavana, ankalazao ny fahafahana, Regrann, Sary navoakan'ny Komitin'ny Zon'olombelona HWLS
Saingy na nisy aza ny fahazotoana ara-tsosialy, zavatra maro kokoa no ilaina vitaina ao amin'ny faritra hampihenana ny fanondranan'olombelona ao amin'ny faritra. Nanao ny fehinteniny i Knights:
Tsy azo lavina fa raharaha sarotra ho an'ny firenena ao Karaiba ny fanondranan'olombelona ary tsy misy ny vahaolana iray mety ho an'ny rehetra. Na izany aza, ilaina ny fanentanana bebe kokoa ny olona amin'ity raharaha ity sy ny rafitra tsara kokoa hitoriana ity heloka bevava ity sy hanohanana ny lasibatra.